Somaliland: Booliska oo soo Bandhigay Gaadhi GT ah oo Lagu Dayacay Waddo Khaldan - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Booliska oo soo Bandhigay Gaadhi GT ah oo Lagu Dayacay Waddo...
Taliyaha ciidanka nabadgelyadda waddooyinka ee galbeedka Hargeysa, Kabtan Maxamed Axmed Ismaaciil, ayaa dirawladda Hay’adaha dawladda ugu baaqay inay ilaaliyaan gaadiidka dawladda ee ay ku shaqeeyaan.
Taliyuhu waxa uu sheegay in shalay waddo khaldan oo ku dhow hudheelka Imperial la dhigay baabuur GT ah oo Surf, lambarkiisuna ahaa 1754 oo inta la qufulay muddo dheer laga maqnaa. Waxaanu dirawalkii gaadhigaas ku sifeeyay qayrul masuul ku gefay sharciga waddo marista Somaliland.
Taliyuhu wuxuu xusay in ninkii gaadhigaas waday uu dayacay hantidii qaranka isla markaana lagu sifayn karo qaadicul-dariiq.“Dirawaliinta waxaannu ugu baaqaynaa inaanay sida dirawalkani sameeyay aanay ku dhaqmin.”
Waa markii koowaad ee taariikhda ciidanka waddooyinku ay shaaciyaan baabuur dawladeed oo ku gefay sharciga waddo marista.